August 2018 - Khit Minnyo
ဆောင်းပါး August 28, 2018
Laptop တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဘာကြည့်ရွေးလေ့ရှိလဲ
ကှနျပြူတာတဈလုံး ဝယျမယျဆိုရငျ ဘာကွညျ့မလဲတဲ့။ မေးတဲ့သူတှရှေိပါတယျ။ သူမြားတှတေော့ ဘာညာတှအေမြားကွီး ကွညျ့ကွပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ ပညာရှငျအမွငျဆိုတာနဲ့ မကွညျ့ပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့အကွိုကျနဲ့ပဲ ရှေးလရှေိ့ပါတယျ။ ကှနျပြူတာအရောငျးဆိုငျတဈဆိုငျထဲကို ကှနျပြူတာတဈလုံး မဖွဈမနေ ဝယျဖို့အတှကျ ရောကျနပွေီဆိုကွပါစို့။ (Laptop တှကေိုပဲ ဦးစားပေးဖျောပွခငျြပါတယျ) ကြှနျတျော ဘာတှအေရငျကွညျ့မလဲဆိုတာ မတိုကျဆိုငျသူမြားရှိရငျလညျး လှတျလပျစှာ သဘောထားကှဲလှဲကွပါစို့။
၁။ ကိုယျဘာသုံးမလဲ ဆိုတာကို အရငျဆုံးဖွတျပါ။ လူအမြားစုက ဟိုဟာသညျဟာ ဘာတှဘေယျလိုဘယျလောကျ ဆိုတာတှရှေေးကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ဘာအတှကျ သုံးမှာလဲဆိုတာကို အရငျစဉျးစားဖို့လိုပါတယျ။ ဥပမာ ဂိမျးမကစားဘဲ Gaming Series ကွီး ဝယျဖို့လို မလိုပေါ့။ အခြို့ဟာတှကေ ပါနရေငျတောငျ ကိုယျ့အတှကျ မလိုအပျဘဲ ရှိကောငျးရှိမှာပါ။ ကြှနျတျောဆို License Windows ပါပွီးသား ကှနျပြူတာတှကေို မဝယျပါဘူး။ Linux Only တငျသုံးတဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ပါလာတဲ့ Windows ကိုပါ ပိုကျဆံပေးရတာကို သဘောမကလြို့ပါ။ ဒါကတော့ ကိုယိဘာသုံးမလဲဆိုတာရဲ့ အရေးပါမှုပေါ့ဗြာ။
၂။ Screensize ရှေးပါ။ အရေးကွီးတယျဗြ။ သယျရလှယျအောငျအကွောငျးပွခကျြနဲ့ သေးသေးလေးဝယျထားမိရငျ ကြှနျတေျာ့လို မကျြလုံးကို အားအရမျးမပွုနိုငျတဲ့သူတှအေတှကျ အခွအေနမေကောငျးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ 15" ထိလောကျသော ဆိုဒျတှကေို ကြှနျတျောမရှေးပါဘူး။ အနညျးဆုံး ၁၅လကျမ ကြျောရမယျပေါ့။ ကြှနျတျောနဲ့ဆနျ့ကငျြပွီး သေးသေးကွိုကျတဲ့လူက သေးသေးရှေးပေါ့ဗြာ။ ဒါ Screensize အရေးပါတယျဆိုတာ ပွောပွတာ။
၃။ i ဘယျလောကျရှေးရမလဲ။ အခြို့က ဒါကို အရမျး crazy ဖွဈကွပါတယျ။ Latest i ကို Last generation ကိုငျနိုငျပိုကောငျးတာပေါ့ဗြာ။ ဒါပမေယျ့ စဉျးစားကွညျ့ဖို့က ဈေးပိုမြားသှားမလား။ ကိုယျမတတျနိုငျဖွဈနရေငျမကောငျးဘူးလေ။ ဒီတော့ ကိုယျက ဘယျလိုအပိုငျးတှေ သုံးမှာလဲ။ တနျရုံဆို i3, i5 သိသိသာသာ ကှာခွားမှုတှရေ့မှာမဟုတျပါ။ ဒီတော့ အသငျ့အတငျ့ ဈေးနှုနျးနဲ့ ရခငျြရငျ i3 ကို gen မွငျ့မွငျ့လေး (4th gen အထကျ) ရှေးလိုကျမှာပါ။ နောကျပိုငျး ကွိုကျသလို Upgrade လုပျနိုငျတာမို့ အရေးမထားပါဘူး။ gamer တှဆေိုရငျတော့ ပိုမွငျ့တာရှေးပေါ့လေ။ Gaming series တှတေောငျ ရှိနတောပဲ။ ခုက သာမနျသုံးမယျ့သူတှအေတှကျပဲ ဦးတညျပွောပွခွငျးပါ။
၄။ RAM ထကျ RAM Slots ကို ဂရုစိုကျပါ။ ဒီနရောမှာတော့ RAM 8GB ကှ၊ RAM 16GB ကှ ဆိုတာတှကေို ကြှနျတျော သိပျဂရုမစိုကျပါဘူး။ RAM Slot က single slot လား twins slot လားပဲ ဂရုစိုကျပါတယျ။ Single slot တှဆေို တဈကဒျပဲ စိုကျလို့ရတာဖွဈလို့ Upgrade လုပျရခကျပါတယျ။ Twins slots မှာ 4GB RAM ပါတဲ့ စကျမှာ 8GB ဖွဈအောငျ Upgrade လုပျခငျြရငျ speed တူ RAM 4GB ကဒျလေး ဝယျစိုကျလိုကျရုံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ Single slot မှာတော့ ရှိနတေဲ့ 4GB ကဒျကို ဖွုတျသိမျးထားပွီး 8GB ကဒျကို အစားထိုးရမယျ။ ဈေးပိုကွီးသှားသလို ကိုယျ့ရှိတဲ့ မူလ RAM ကဒျကွီးလညျး ခြောငျထိုးခံရတဲ့အခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောအကွိုကျဆုံး ကို ပွောရရငျ 16GB နှဈကဒျ စိုကျသုံးလို့ရတာကို ပိုကွိုကျပါတယျ။ ကြှနျတျောသုံးခငျြတာအားလုံးအတှကျ 32GB လောကျမှ လောကျမှာမို့ပါ။ ဒါကွောငျ့ RAM slot ကို ပိုရှေးပါ။
၅။ 32bit 64bit ဘယျဟာရှေးမလဲမေးသူတှအေတှကျ။ ရှငျးမပွတော့ဘူးဗြာ။ 64 bit ထဲကပဲ ဝယျပါလို့ပဲ ပွောပါရစေ။
၆။ HDD or SSD? ဒါကလညျး အတျောမြားမြား ရှေးခယျြမှု ကြှနျတျောနဲ့ မတူတဲ့အခကျြပါ။ SSD က ပိုမွနျတာ မှနျပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ လကျရှိတောငျမှ 512GB ထိသာ အမြားဆုံး ထှကျသေးတဲ့ SSD ကွီးက စိတျပကျြစရာပါ။ 2TB HDD တပျထားတာတောငျ သိပျပွီး အဆငျမပွခေငျြတဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ သူ့ဟာသူ ဘယျလောကျကွီးပဲ မွနျမွနျ စဉျးစားလို့ကို မရသေးပါ။ 2TB SSD ထှကျလာခဲ့တဲ့နကေ့ရြငျတော့ ကြှနျတျော လဲသုံးပါမယျ။ ဒီတိုငျးတော့ RAM ကိုပဲ ပိုဂရုစိုကျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လောလောဆယျ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ SSD ကို RAM လောကျ prefer မဖွဈပါ။ ကြှနျတေျာ့လို app တှအေတှကျ နရောအမြားကွီးပေးသုံးစရာ မလိုဘူးဆိုရငျတော့ SSD ရှေးပေါ့။ ပိုမွနျပါတယျ။
၇။ Brand ဘာရှေးမလဲ။
ကြှနျတျော Brand စှဲမထားတတျသူပါ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောက နညျးနညျးတော့ ကွေးတိုကျတတျတယျဗြ။ Specification ခငျြးတူရငျ ဈေးပိုသကျသာတာကို ကြှနျတျောပိုကွိုကျပါတယျ။ 😁 ဒါကလညျး DELL လို Laptop တှကေို ပိုဦးစားပေးမိတဲ့အထဲ ပါစတောပေါ့။ Asus တို့ကကြ Spec ခငျြးတူတာတောငျ ဈေးတျောတျောပိုကွီးနတောတှရေ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောကတော့ Brand စှမထားပါဘူး။။
၁ RAM ကို ကြှနျတျောလိုခငျြတဲ့ twins slots ပါတဲ့ထဲက 32GB လောကျထိ upgrade လုပျနိုငျမှာကို ဦးစားပေးဖွဈပါတယျ။ တကယျတမျးလညျး 32GB ထိ upgrade လုပျမှာပါ။ ခုမတတျနိုငျဘူးဆိုရငျတောငျ ခဏစောငျ့မှာပေါ့။
၂။ SSD မရှေးပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့မှာ SATA, 2TB HDD တဈလုံး အသငျ့ရှိပါတယျ။ External မှာ ဒတောတှသေိမျးတာက သပျသပျပေါ့။ ဒါကွောငျ့ အထဲမှာ gb ဘယျလောကျပဲ ပါပါ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ပွဿနာ မရှိပါဘူး။
၃။ i3 ဖွဈနလေို့လညျး ကြှနျတျော စိတျဓာတျမကပြါဘူး။ latest ကို upgrade လုပျလို့ရတာပဲ။ အတိုငျးအတာ တဈခုထိ စုပွီး upgrade လုပျနိုငျတာပဲလေ။။
၄။ Screensize ကြှနျတျောနဲ့ အဆငျပွမေယျ့အနအေထား။ ဒီဇိုငျးစိတျကွိုကျ။ ဘကျထရီ ကွာကွာအသုံးခံမယျ့ထဲကရှေးလိုကျ။ ကနျြတာတှတေူရငျ ဈေးပိုသကျသာတာရှေးလိုကျ။ ဒါပဲလေ။ ကနျြတာတှကေိုတော့ ကြှနျတျောမစဉျးစားပါဘူး။ SSD တဈခြိနျကြ Upgrade လုပျကိုလုပျမှာပါ။ RAM ဒါလညျး Upgrade လုပျပွီးသုံးမှာ။ စကတညျးက ဘယျလောကျပါပါ ကြှနျတျောစိတျမဝငျစားပါ။ ဘယျလောကျထိ Upgrade လုပျလို့ရမလဲဆိုတာပဲ ကြှနျတျော စိတျဝငျစားပါတယျ။ i3,5,7 တှကြှေနျတျောမပူပါ။ upgrade လုပျလို့ရနိုငျတာတှအေပျေါ ကြှနျတျောလုံးဝမပူပါ။ မေးခှနျးကိုက ကြှနျတျောဆိုရငျ ဘာရှေးမလဲ လို့မေးတာကွောငျ့ အမေးအဖွကေဏ်ဍမှာ ကြှနျတျောရှေးမယျ့ပုံစံကိုပဲ ဖွခေဲ့တာ့ဖဈပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အတိုငျးလိုကျရှေးရမယျလို့ လုံးဝမဆိုလိုပါ။ ကြှနျတျောသုံးမှာတှနေဲ့ မိတျဆှတြေု့ရဲ့ လိုအပျခကျြတှလေညျး တူခငျြမှ တူမှာပါ။ ကြှနျတျောက Gaming Series တှကေို လုံးဝမကွိုကျပါ။ သဘောလညျးမကပြါ။ ဒီဇိုငျးဘာညာကအစ ကြှနျတျော မကွိုကျပါ။ ရှောငျပါတယျ။ အဆိုးဆုံးက သူ့ Kernel version ကို ပိုမကွိုကျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ မိတျဆှတေို့က Gamer တှဆေိုရငျတော့ Gaming series တှကေို ကွိုကျကွမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောပွောတာလေ။ ကြှနျတျော ဘာရှေးမလဲမေးလို့ ကြှနျတျောရှေးမယျ့ပုံစံကိုပဲ ရှငျးပွတာပါလို့။ မေးထားတဲ့မိတျဆှတေို့လညျး ကနြေပျမယျထငျပါတယျဗြာ။ See u on next week.
ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘာကြည့်မလဲတဲ့။ မေးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ သူများတွေတော့ ဘာညာတွေအများကြီး ကြည့်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပညာရှင်အမြင်ဆိုတာနဲ့ မကြည့်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အကြိုက်နဲ့ပဲ ရွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံး မဖြစ်မနေ ဝယ်ဖို့အတွက် ရောက်နေပြီဆိုကြပါစို့။ (Laptop တွေကိုပဲ ဦးစားပေးဖော်ပြချင်ပါတယ်) ကျွန်တော် ဘာတွေအရင်ကြည့်မလဲဆိုတာ မတိုက်ဆိုင်သူများရှိရင်လည်း လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲကြပါစို့။
၁။ ကိုယ်ဘာသုံးမလဲ ဆိုတာကို အရင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ လူအများစုက ဟိုဟာသည်ဟာ ဘာတွေဘယ်လိုဘယ်လောက် ဆိုတာတွေရွေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက် သုံးမှာလဲဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ ဂိမ်းမကစားဘဲ Gaming Series ကြီး ဝယ်ဖို့လို မလိုပေါ့။ အချို့ဟာတွေက ပါနေရင်တောင် ကိုယ့်အတွက် မလိုအပ်ဘဲ ရှိကောင်းရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်ဆို License Windows ပါပြီးသား ကွန်ပျူတာတွေကို မဝယ်ပါဘူး။ Linux Only တင်သုံးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ပါလာတဲ့ Windows ကိုပါ ပိုက်ဆံပေးရတာကို သဘောမကျလို့ပါ။ ဒါကတော့ ကိုယိဘာသုံးမလဲဆိုတာရဲ့ အရေးပါမှုပေါ့ဗျာ။
၂။ Screensize ရွေးပါ။ အရေးကြီးတယ်ဗျ။ သယ်ရလွယ်အောင်အကြောင်းပြချက်နဲ့ သေးသေးလေးဝယ်ထားမိရင် ကျွန်တော့်လို မျက်လုံးကို အားအရမ်းမပြုနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် အခြေအနေမကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် 15" ထိလောက်သော ဆိုဒ်တွေကို ကျွန်တော်မရွေးပါဘူး။ အနည်းဆုံး ၁၅လက်မ ကျော်ရမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး သေးသေးကြိုက်တဲ့လူက သေးသေးရွေးပေါ့ဗျာ။ ဒါ Screensize အရေးပါတယ်ဆိုတာပြောပြတာ။
၃။ i ဘယ်လောက်ရွေးရမလဲ။ အချို့က ဒါကို အရမ်း crazy ဖြစ်ကြပါတယ်။ Latest i ကို Last generation ကိုင်နိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားကြည့်ဖို့က ဈေးပိုများသွားမလား။ ကိုယ်မတတ်နိုင်ဖြစ်နေရင်မကောင်းဘူးလေ။ ဒီတော့ ကိုယ်က ဘယ်လိုအပိုင်းတွေ သုံးမှာလဲ။ တန်ရုံဆို i3, i5 သိသိသာသာ ကွာခြားမှုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါ။ ဒီတော့ အသင့်အတင့် ဈေးနှုန်းနဲ့ ရချင်ရင် i3 ကို gen မြင့်မြင့်လေး (4th gen အထက်) ရွေးလိုက်မှာပါ။ နောက်ပိုင်း ကြိုက်သလို Upgrade လုပ်နိုင်တာမို့ အရေးမထားပါဘူး။ gamer တွေဆိုရင်တော့ ပိုမြင့်တာရွေးပေါ့လေ။ Gaming series တွေတောင် ရှိနေတာပဲ။ ခုက သာမန်သုံးမယ့်သူတွေအတွက်ပဲ ဦးတည်ပြောပြခြင်းပါ။
၄။ RAM ထက် RAM Slots ကို ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ RAM 8GB ကွ၊ RAM 16GB ကွ ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော် သိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ RAM Slot က single slot လား twins slot လားပဲ ဂရုစိုက်ပါတယ်။ Single slot တွေဆို တစ်ကဒ်ပဲ စိုက်လို့ရတာဖြစ်လို့ Upgrade လုပ်ရခက်ပါတယ်။ Twins slots မှာ 4GB RAM ပါတဲ့ စက်မှာ 8GB ဖြစ်အောင် Upgrade လုပ်ချင်ရင် speed တူ RAM 4GB ကဒ်လေး ဝယ်စိုက်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Single slot မှာတော့ ရှိနေတဲ့ 4GB ကဒ်ကို ဖြုတ်သိမ်းထားပြီး 8GB ကဒ်ကို အစားထိုးရမယ်။ ဈေးပိုကြီးသွားသလို ကိုယ့်ရှိတဲ့ မူလ RAM ကဒ်ကြီးလည်း ချောင်ထိုးခံရတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ကို ပြောရရင် 16GB နှစ်ကဒ် စိုက်သုံးလို့ရတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သုံးချင်တာအားလုံးအတွက် 32GB လောက်မှ လောက်မှာမို့ပါ။ ဒါကြောင့် RAM slot ကို ပိုရွေးပါ။
၅။ 32bit 64bit ဘယ်ဟာရွေးမလဲမေးသူတွေအတွက်။ ရှင်းမပြတော့ဘူးဗျာ။ 64 bit ထဲကပဲ ဝယ်ပါလို့ပဲ ပြောပါရစေ။
၆။ HDD or SSD? ဒါကလည်း အတော်များများ ရွေးချယ်မှု ကျွန်တော်နဲ့ မတူတဲ့အချက်ပါ။ SSD က ပိုမြန်တာ မှန်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ လက်ရှိတောင်မှ 512GB ထိသာ အများဆုံး ထွက်သေးတဲ့ SSD ကြီးက စိတ်ပျက်စရာပါ။ 2TB HDD တပ်ထားတာတောင် သိပ်ပြီး အဆင်မပြေချင်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူ့ဟာသူ ဘယ်လောက်ကြီးပဲ မြန်မြန် စဉ်းစားလို့ကို မရသေးပါ။ 2TB SSD ထွက်လာခဲ့တဲ့နေ့ကျရင်တော့ ကျွန်တော် လဲသုံးပါမယ်။ ဒီတိုင်းတော့ RAM ကိုပဲ ပိုဂရုစိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လောလောဆယ် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ SSD ကို RAM လောက် prefer မဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော့်လို app တွေအတွက် နေရာအများကြီးပေးသုံးစရာ မလိုဘူးဆိုရင်တော့ SSD ရွေးပေါ့။ ပိုမြန်ပါတယ်။
၇။ Brand ဘာရွေးမလဲ။ ကျွန်တော် Brand စွဲမထားတတ်သူပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က နည်းနည်းတော့ ကြေးတိုက်တတ်တယ်ဗျ။ Specification ချင်းတူရင် ဈေးပိုသက်သာတာကို ကျွန်တော်ပိုကြိုက်ပါတယ်။ 😁 ဒါကလည်း DELL လို Laptop တွေကို ပိုဦးစားပေးမိတဲ့အထဲ ပါစေတာပေါ့။ Asus တို့ကကျ Spec ချင်းတူတာတောင် ဈေးတော်တော်ပိုကြီးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ Brand စွမထားပါဘူး။
၁။ RAM ကို ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ twins slots ပါတဲ့ထဲက 32GB လောက်ထိ upgrade လုပ်နိုင်မှာကို ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းလည်း 32GB ထိ upgrade လုပ်မှာပါ။ ခုမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် ခဏစောင့်မှာပေါ့။
၂။ SSD မရွေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ SATA, 2TB HDD တစ်လုံး အသင့်ရှိပါတယ်။ External မှာ ဒေတာတွေသိမ်းတာက သပ်သပ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် အထဲမှာ gb ဘယ်လောက်ပဲ ပါပါ ကျွန်တော့်အတွက် ပြဿနာ မရှိပါဘူး။
၃။ i3 ဖြစ်နေလို့လည်း ကျွန်တော် စိတ်ဓာတ်မကျပါဘူး။ latest ကို upgrade လုပ်လို့ရတာပဲ။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ စုပြီး upgrade လုပ်နိုင်တာပဲလေ။
၄။ Screensize ကျွန်တော်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့်အနေအထား။ ဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်။ ဘက်ထရီ ကြာကြာအသုံးခံမယ့်ထဲကရွေးလိုက်။ ကျန်တာတွေတူရင် ဈေးပိုသက်သာတာရွေးလိုက်။ ဒါပဲလေ။ ကျန်တာတွေကိုတော့ ကျွန်တော်မစဉ်းစားပါဘူး။ SSD တစ်ချိန်ကျ Upgrade လုပ်ကိုလုပ်မှာပါ။ RAM ဒါလည်း Upgrade လုပ်ပြီးသုံးမှာ။ စကတည်းက ဘယ်လောက်ပါပါ ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားပါ။ ဘယ်လောက်ထိ Upgrade လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာပဲ ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ i3,5,7 တွေကျွန်တော်မပူပါ။ upgrade လုပ်လို့ရနိုင်တာတွေအပေါ် ကျွန်တော်လုံးဝမပူပါ။ မေးခွန်းကိုက ကျွန်တော်ဆိုရင် ဘာရွေးမလဲ လို့မေးတာကြောင့် အမေးအဖြေကဏ္ဍမှာ ကျွန်တော်ရွေးမယ့်ပုံစံကိုပဲ ဖြေခဲ့တာ့ဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတိုင်းလိုက်ရွေးရမယ်လို့ လုံးဝမဆိုလိုပါ။ ကျွန်တော်သုံးမှာတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတျု့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေလည်း တူချင်မှ တူမှာပါ။ ကျွန်တော်က Gaming Series တွေကို လုံးဝမကြိုက်ပါ။ သဘောလည်းမကျပါ။ ဒီဇိုင်းဘာညာကအစ ကျွန်တော် မကြိုက်ပါ။ ရှောင်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက သူ့ Kernel version ကို ပိုမကြိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေတို့က Gamer တွေဆိုရင်တော့ Gaming series တွေကို ကြိုက်ကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောတာလေ။ ကျွန်တော် ဘာရွေးမလဲမေးလို့ ကျွန်တော်ရွေးမယ့်ပုံစံကိုပဲ ရှင်းပြတာပါလို့။ မေးထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်း ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ See u on next week.
By KhitMinnyo on August 28, 2018 No comments:
Labels: Articles, Q & A, ဆောင်းပါး
ဆောင်းပါး August 26, 2018
By KhitMinnyo on August 26, 2018 1 comment:
Q & A August 23, 2018
By KhitMinnyo on August 23, 2018 1 comment:
ဆောင်းပါး August 23, 2018
Freelancer ဆိုတာ ဘာလဲ။ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရလဲ။ ဘာအလုပ်တွေ လုပ်နိုင်မလဲ။ ဘယ်လောက်ထိ ဝင်ငွေ ရနိုင်လဲ။
Click Here to create Freelancer Account
Account ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် လုပ်နိုင်မယ့် အလုပ်တွေကို ရှာလို့ရပါပြီ။ အလုပ်အမျိုးအစားတွေကတော့ ...
Account ဖှငျ့ပွီးပွီဆိုရငျ လုပျနိုငျမယျ့ အလုပျတှကေို ရှာလို့ရပါပွီ။ အလုပျအမြိုးအစားတှကေတော့ ...
Design, Media & Atchitecture
Business, Accounting,Human Resources & Legal
Create Paypal from Myanmar
ကျွန်တော် ကြိုတင်ပြောပြထားခဲ့သလိုပဲ ပိုက်ဆံရှာတဲ့ site မဟုတ်ပါ။ အွန်လိုင်းကနေ အလုပ်ရှာလုပ်တဲ့ site သာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ ထပ်မံပြောပြရင်း
By KhitMinnyo on August 23, 2018 20 comments:
Labels: Q & A, ဆောင်းပါး
Windows August 21, 2018
DVWA အကြောင်း နှင့် DVWA ကို VirtualBox မှာတင်နည်း
Please, waitamoment to view all pictures. It may takes up to 30 seconds according to your connection.
Click Here to Download DVWA ISO
How to Install Step by Steps
First, Open virtualbox. And then, click "New". (Fig: 1)
Name as you like. Choose Type: Linux & version Linux 2.6/3.x/ (32bit). And then, click Next. (Fig: 2)
Default Memory Size (RAM) 512MB. Don't reduce it. And then, click Next. (Fig: 3)
Select "Createavirtual hard disk now" and click "Create". (Fig: 4)
Let it be as "VDI" and Next ... (Fig: 5)
Select "Dynamically Allocated" and Click Next. (Don't choose Fixed size) (Fig: 6)
Let it be as default 8GB and then click "Create" ( (Fig: 7)
Don't worry about that because we chose Dynamically allocated.
Select DVWA & click "Settings" (Fig: 8)
In "System" >> Motherboard, select as the above picture. (Fig: 9)
In "Storage" >> Empty disc, Choose your downloaded DVWA iso. (Fig: 10)
In Network >> Adapter1, choose "Bridged Adapter" in "Attached to:" and then click "OK". (Fig: 11)
Now, you can start installing. (Fig: 12)
Don't type anything. Press Enter key only. (Fig: 13)
Press "Down Arrow" on your Keyboard to choose install within 25 seconds. (Fig: 14)
Afteramoment, you can see as above picture. (Fig: 15)
Enter "ifconfig" command in dvwa's command line . And note IP address at eth0. In above picture, IP address of dvwa is 192.168.8.104. (Fig: 16)
Type "DVWA's IP address" in your browser's address bar. Now you can login with Username = admin && Password = password . (Fig: 17)
If you face any problem, you can watch following movie.
By KhitMinnyo on August 21, 2018 No comments:
Labels: Articles, Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Lab, Q & A, Windows
Q & A August 20, 2018
PayPal Account ကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ
By KhitMinnyo on August 20, 2018 1 comment:
Windows August 19, 2018
By KhitMinnyo on August 19, 2018 No comments:
ဆောင်းပါး August 15, 2018
By KhitMinnyo on August 15, 2018 12 comments: